जनतालाई एक खर्बको IPO आउदै, कुनकुनको कति आउदै ? हेर्नुहोस – Esancharpati
3 months ago Thursday, February 14, 2019esancharpati
काठमाडौं : सरकारको नेतृत्वमा सर्वसाधारणलाई १ खर्ब २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर जारी हुने भएको छ । सरकारले ६ खर्ब ९५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण गर्न लागेका १९ जलविद्युत् आयोजनाको सेयर सर्वसाधारणलाई आइपीओका रुपमा बिक्री गर्न लागेको हो । कुल लागतमध्ये ४ खर्ब ८७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ ऋण र बाँकी २ खर्ब ८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ स्वपुँजी रहनेछ । स्वपुँजीको ४९% हिस्सा सर्वासाधारणलाई दिइने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
४९% मध्ये १०% आयोजना प्रभावित स्थानीय र बाँकी ३९% सेयर सर्वसाधारणका लागि जारी गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । यता, ५१% हिस्सा (१ खर्ब ६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ) को संस्थापक सेयर भने सरकार तथा माताहतका निकायबाट संकलन गरिनेछ । कुल लागतको ७०% ऋण लिइने सरकारको योजना रहेको छ ।
चैत ७ गतेदेखि जलविद्युत कम्पनीको सेयर निष्कासन सुरु हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युतको सेयरधनी’ नाराका साथ जनताको जलविद्युत अयोजना कार्यक्रमको बिहीबार शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी चैत ७ गतेदेखि सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्ने कार्य सुरु हुने बताएका छन् । उनले भने, ‘चैत ७ गतेदेखि जलविद्युत् कम्पनीको सेयर निष्कासन सुरु हुन्छ, पहिलो खरिदकर्ता म नै हुनेछ ।
यसैगरी, क्रमशः दोस्रो, तेस्रो गर्दै ३ करोड नेपाली नै हाइड्रोपावरका सेयरधनी बन्नुपर्छ ।’ साथै, उनले पैसालाई चलायमान बनाउन पनि सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘१० हजार रुपैयाँ छ भने पनि हाइड्रोमा सेयर हाल्नुहोस्, यसले राम्रो प्रतिफल दिन्छ ।’
सेयरमा २ किस्ता गरेर आवेदन दिन सकिने
सरकारले निर्माण गर्न लागेको हाइड्रोपावर आयोजनामा २ पटक गरेर सेयर खरिद गर्न सकिने उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले बताए । यसका लागि अनिवार्य रुपमा डिम्याट खाता र बैंक खाता खोलेको हुनुपर्नेछ ।
पहिलो किस्ता अन्तर्गत लगानीकर्ताले आवेदनका साथ खरिद गर्न प्रतिबद्धता गरेको रकमको १०% बुझाउनुपर्छ । दोस्रो किस्तामा आयोजना निर्माणको न्यूनतम ७५% भौतिक प्रगति हासिल भएपछि मात्रै प्रतिबद्धता अनुसारको बाँकी ९०% रकम बुझाए हुनेछ ।
यसका लागि बिक्री प्रबन्धक मार्फत सेयरको सार्वजनिक निष्कासन हुने र सेयर लगानी गर्न इच्छुक व्यक्तिले आस्वा प्रणालीमार्फत आवेदन दिन सक्ने सचिव घिमिरेले जानकारी दिए । यसका लागि नेपाल धितपत्र बोर्डसँग आवश्यक समन्वय भएको उनले बताए ।
कुन प्रदेशमा कुन–कुन आयोजना बन्दैछन् ?
सरकारले प्रदेश नं २ बाहेक अन्य ६ वटै प्रदेशमा आयोजना निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको छ । ६ वटा प्रदेश गरेर कुल ३ हजार ४७९ मेगावटको १९ अयोजना निर्माण हुनेछन् । सबैभन्दा धेरै प्रदेश १ मा ६ वटा आयोजना बन्ने भएका छ्न्। अन्तैबाट
जनता को जलबिधुत कार्यक्रम सुरु, ७अर्ब लगानी मा १९ आयोजना बन्ने
जुवा खेल्नेलाई ३ वर्ष, बाजी थाप्नेलाई पनी एक वर्ष जेल